70mai Archives - SmartMe
Archives tag: 70mai
Dom » Entries tagged with "70mai"
Smart Home Aprily 2021 - Yale Linus, 70mai ary Philips Hue
70mai, philips hue, tranofiara, unboxing, Yale, yale linus
andry, Smart Pets
Rehefa alika no tadiavinao! Vahaolana 5 maranitra ho an'ny biby fiompy ao an-trano
19 Janoary 2021
70mai, fanadiovana rivotra, TONGOTR'IZY, vacuum madio, biby marani-tsaina, xiaomi
Izaho dia nahita ny hevitra ho an'ity lahatsoratra ity noho ny hoe maniry alika aho. Na izany aza, henoko ny feo isan-karazany manohitra, satria ny volo, satria ny alergen, satria tsy maintsy mivoaka ianao ... Ka hamaly azy ireo amin'ny vahaolana maranitra manokana aho. Ary rehefa ...
hevitra, Smart Auto
70mai A800. Mora, nefa tsara ary amin'ny 4K. Fanamarihana fakan-tsarimihetsika fiara indroa
9 Novambra 2020
70mai, 70mai a800, fakan-tsary
Fotoana izao hijerena cam cam 70mai A800 hafa. Araka ny efa fantatrareo, mpankafy fitaovana Vi Viago aho. 70mai dia nanao webcam tamina sarany mitovy amin'izany, fa mitandrema ... amin'ny 4K. Tena mendrika ...
Smart Auto, Unboxing
70mai A800 Dual - unboxing
70mai, 70mai a800, fakan-tsary, mikavi, viofo
Fotoana famoahana ny boaty fakan-tsary 70mai farany sy lehibe indrindra! Ny fakantsary voalohany miaraka amin'ny mode parking sy fakantsary aoriana. Ary sambany eo anoloan'ny fakantsary - Paweł!
Vaovao, Smart Auto
70mai A800 - ny fakantsary 70mai voalohany misy 4K sy fandraisam-peo miverina
15 Aogositra 2020
70mai dia orinasa mifandraika Xiaomi mamorona fakan-tsary. Nanana fahafahana nanandrana betsaka ny vokatra azony izahay, fa ny tsy hita dia fakan-tsary miaraka amin'i Dual-Vision, izay no mitranga ao ambadiky ny fiaranay. Down ...
Tyro sensor sensor 70mai - Famerenana
70mai, sensor sensor tsirambina
Iray amin'ireo gadget izay tsy anananao ary mieritreritra fa tsy mila ianao. Fa rehefa manana kodiarana matevina ianao dia hahita azy fa mahasoa! ;) 70mai famerenana ny tsindry sensor sensor!
70mai sensor press pressure - tsy mandeha boaty
3 Jolay 2020
Tianao ny tsy misy takelaka? Izahay dia manana anao! Androany isika dia manovo fantsom-bokatra kodiarana 70mai!
Sensor tsindry Tyro manomboka amin'ny 70mai - famerenana
70mai, sensor sensor tsirambina, fiara
Tsy ho ela dia hizahanay ny portfolio-ny vokatra 70mai manontolo;) Ity orinasa ity dia mamokatra fitaovana marani-tsaina ho an'ny fiara ary mifamatotra amin'i Xiaomi. Ny vokatra iray hafa azontsika nijerena azy dia ny sensor sensor tsatokazy. Ahoana...
70mai fiara madio kokoa - Famerenana horonantsary
70mai, madio banga
Raha tianao ny hevitra amin'ny endrika Video, misy zavatra ho anao! Ny biraon'ny fiara vaventy 70mai dia manampy tsara amin'ny fiara rehetra :) Tongasoa eto amin'ny famerenana!